Dhalinyarada & Dagaallada - Hanti Samayn
Barnaamijka Dhalinyarada Maanta iyo Dagaallada ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa hal-buurka dhalinyarada ee ganacsiga iyo hanti abuurista. Waxaana marti ku ah Axmed Jaamac Jawle oo ku sugan Boosaaso, Puntland.
Barnaamijkan dhalinyarada Maanta iyo Dagaallada ee toddobaadkan waxauu ku saabsan yahay Ganacsiga ooa sannidihii ugu dambeeyey ahaa meherradda ugu weyn ee ay ku lug leeyihiin dadka Soomaalida ah, kuwaasi oo qaar badan oo ka mid ah ay yihiin dhalinyaro da’yar.
Mid ka mid ah dhalinyarada ku najaxday ganacsiga waaa Axmed Jaamac Jawle oo ku sugan magaalada Boosaaso, waxana uu shan sano ka hor abuuray shirkad ganacsi taasoo haatan hantideedu ballaadhan tahay. Axmed Jaamac Jawle waxa uu ka hadlayaa sida ay dhalinyarada uga guul gaari karaan ganacsiga iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin.
Dhalinyarada & Hantida